Kutsvaga Bariatric Wiricheya uye Heavy Duty Chairs | Karman® Zvakaoma
musha / Chinyorwa Wiricheya / Bariatric Wiricheya
Bariatric Wiricheya uye Anorema Duty Chairs
A bariatric wiricheya inowanzo kunzi se rinorema basa wiricheya kana yakawedzera yakafara wiricheya iine huremu hwekuwedzera, hwakasimbiswa muchinjiko, uye zvimwe zvakasiyana dhizaini kuona kuti kune kugadzikana kwakasimba kwekubata rutsigiro rwakawedzerwa.
Kunyangwe iri yekuwedzera huremu hunodiwa zvinodiwa, kana ingori yakafara chigaro pani kana chigaro upamhi, Karman ane akati wandei emacheya anowanikwa mune Yakawedzera Wide chikamu, kune akati wandei mamodheru uye zvigaro upamhi kusarudza kubva mu yakagara pawiricheya kana neimwe nzira inozivikanwa se Yekumusoro Kumashure Wiricheya Chikamu.
Isu tinewo mamota ewheelchair ekufambisa, akareruka kurema muchikamu chayo, isu tinopawo mawiricheya anoenderana uye aine huremu hwekupfuurisa pamusoro pe550 lbs uye 30 ″ pachigaro upamhi.
A bariatric wiricheya inogona kubatsira kuwedzera kufamba kwevarwere. Dhizaini yedu inotenderera nenzira dzekuwedzera kufamba uye kudzivirira iro rekuwedzera mutoro kubva mukudzikisira kushandiswa kwemurwere uye kuzvimirira. Yedu chaiwo magadzirirwo anosanganisira akawedzera ekuwedzera ekusimbisa pakusona, machira, uye dzakasiyana mhando dzebhegi uye kufunga kwekunyatso gadzira edu mawiricheya imwe yerudzi.
Kana munhu achikwanisa kufamba ega, zvinorerutsa mutoro pamuchengeti wavo. Zvinonetsa zvikuru kuva nguva dzose pa “kutariswa” kune munhu akaremara. Chero chipi zvacho chinopa huwandu hwerusununguko chakanakira vese murwere neanopa rubatsiro.
Bariatric Wiricheya iri mufananidzo we rinorema basa wiricheya iyo yakagadzirirwa vashandisi vanoda imwe nzvimbo yekuwedzera nyaradzo. inorema basa mawiricheya zvakagadzirirwa chaizvo vashandisi vane hombe yemuviri, uremu hwedu hunosvika kusvika ku 550 lbs. Muchikamu chino chemawiricheya unogona kuwana hukuru hwechigaro kupfuura zvigaro zvakajairika, zvedu bariatric mawiricheya uve nechigaro chakafara kusvika pamakumi matatu nematanhatu.
Our bariatric mawiricheya kupa imwe rutsigiro uye kugadzikana, furemu yedu yakanyatsogadzirirwa kuwedzera mushandisi kuchengetedzeka. Sezvo mawiricheya ari muchikamu ichi achiwedzera rutsigiro rwesimba ekisero, paunenge uchishandisa chigaro, unonzwa kugadzikana uye uchave nekufamba kwakatsetseka kupfuura zvigaro zvakajairika.
Kana iwe uchitsvaga wiricheya inokutendera iwe chinja mukati nekunze zviri nyore, ipapo unofanirwa kutarisa mutsara we inorema basa mawiricheya, ayo akakodzera kuchinjisa, pasina mukana wekudonha kubva pachigaro cheya.
Kutsvaga chairo vhiricheya kuFIT YAKO kwakakosha. Ndokusaka isu takaparura iyo nyowani ERGO FIT ™ Campaign yakavakirwa pazvakakodzera Wiricheya Ergonomics, uchienzanisa uye uchisiyanisa miviri yako miviri inoda, yako Mawiricheya Zviyero, uye zvakare kuenzanisa nharaunda yauchange uchinakidzwa newiricheya yako.
Iwe unoda Rinorema Duty kana Bariatric Wiricheya?
Mazhinji mawiricheya anobuda pa18-20 "upamhi hwechigaro uye 220-250lbs chigaro chekurema. Kune akaomarara FDA kuyedza uye ASTM zvinodiwa kuti vakwanise wiricheya. Aya matongero akangofanana ne" crash test "ratings yemota. Kuti unyatso kukodzera pamusoro pe250lbs, uye inosvika capacitis inosvika 550lbs uye zvigaro zvehupamhi zvinowedzera kupfuura 22-38 "zvigaro zvehupamhi, zvakakosha kutenga kubva kuBrand inomira kuseri kwechigadzirwa uye yanga iriko kwenguva yakareba zvakakwana kuti uzive kutendeseka uye mhando ndezvei. KuKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru emawichecha emawoko ekusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa pawiricheya, iwe uchazoda iyo isina kureruka yakanyatsogadzikana wiricheya iripo. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nechigadzirwa uremu uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako: